ኦሮሚያ ውስጥ በብዙ ቦታ መንግስት የቀሰቀሰው ዓመፅ እየተካሄደ ነው። ለዚህ አመፅ እና ተከትሎ ለሚመጣው ጥፋት መንግስት ተጠያቂ ነው።Dereje Gerefa Tullu – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsኦሮሚያ ውስጥ በብዙ ቦታ መንግስት የቀሰቀሰው ዓመፅ እየተካሄደ ነው። ለዚህ አመፅ እና ተከትሎ ለሚመጣው ጥፋት መንግስት ተጠያቂ ነው።Dereje Gerefa Tullu
ኦሮሚያ ውስጥ በብዙ ቦታ መንግስት የቀሰቀሰው ዓመፅ እየተካሄደ ነው። ለዚህ አመፅ እና ተከትሎ ለሚመጣው ጥፋት መንግስት ተጠያቂ ነው።Dereje Gerefa Tullu
ኦሮሚያ ውስጥ በብዙ ቦታ መንግስት የቀሰቀሰው ዓመፅ እየተካሄደ ነው።
ለዚህ አመፅ እና ተከትሎ ለሚመጣው ጥፋት መንግስት ተጠያቂ ነው።Dereje Gerefa Tullu
Abbaan Gadaa Dabbalelefi kaadiree mootummaa ta’uu hinqabu ture. Kankeenya garuu gaafa muudamtee kaatee dabballummaa guutuu fudhatti. Kanaf yeroo uummanni dhumu as baatee miidiyaa dabballeesheen watwwaatti. Oromoon gaaffii qabaaf ba’ee dhumaa jira malee isa inni xibaaru kanaaf miti. Kan qawween saba fixaa jiru mootumamadha
AKaakkachiisa Guddaa!-Dubbii jaarsummaa
OPDOn jaarsolii Abbaa gadaafi maaloo maaliyyoo guurtee #Jawar Mohammed bira dhaqaa jirti; OBN ishee snaarrattis as baatee xibaaruuf qophaa’aa jirti. Yaa Oromoo! Jaarsummaan aadaa keenyaadha. Oromoon dhugaa qaba. Garuu nibbaayyate. Kun lubbuun qosuudha. Jaarsummaan barbaachisu hinjiru. Oromoon wagga dheeraaf dhumaa jira. Oromoo kan araarsu Bilisummaa qofa. OPDOn wagga lama kana gidduutti jaarsummaa yeroo 20 ol teesse. Kuna mala siyaasa isaaniiti. Nama jaarsummaan sinii dhaqa jedhee miidiyaarratti sinitti baacu akka diina sanaatti ilaallaa. Oromoon gaaffii qaba. Gaaffiinsaa %5 hindeebineef. Oromiyaan kan bara dur caalaa reef garbummaa haaraa shaakalaa jira. Kolonel Abiy Ahmed ilma Minilik isa haangafa. Waggaa 28 darban keessas wayyaane ekeessa taa’ee dhiigakee xuuxaa ture. Har’as Dhiigakee Habashaan xuuchisaa jira. Harka walqabadhuuti qabsookee finiinsi. Gaaffiin gaaffii jawar Mohammed qofa miti. Innis xuqamuu hinqabu. Finfinnee kan Habahsaan keessaatti nu arrabsaa oolu keessaatti mana dhaqanii doorsisuun situffachuudha. Harka walqabadhuu ka’i.
#Oromoon waliin dhaabbata! Qabsoon keenya itti fufa!!
Qeerroo protesters, denouncing the threat leveled against Oromo activist Jawar by PM Abiy, have burnt the PM’s MEDEMER books. ‘MEDEMER’ is said to be a Neo-Neftegna ideology book. The Neftegna system was a violent assimilation system led by a unitary military government; the PM & his Neo-Neftegna supporters want to bring that system back.
Elaamee yaa Qomoo ofii,
Sangaan kun dhaqee mana Jawar’tti qalamuunsaa dhumaatii Oromoo dagachiisuuf miti. Tarii balaa jarru kun akeekteen utuu Jawar waa ta’eera ta’ee maaltu ta’a ture? Yoona Finfinne edabalatee Oromiyaa mara keessaatti maal akak ta’u tilmaamaa. Akka xiinxalakootti Qalamuun korma kanaa:
1. habashoota ‘Bala Adaraa’ Finfinnee keessaa Jawar’n liqimsuuf hamuummattuuf ergaa qaba; Oromoon waliin jira jechuufidha.
2. Oromoon Kormasaa kormaa qaleefi jaalala isaaf qabu agarsiisuusaati malee waa’een dhumaatii namoota keenya qalamaa jiru kun jalaa dagatameetu miti.
Ammas qabsoon eegalame male hinxumuramne. Bor iftaanis Finfinnee keessaatti jarri kun Jawar’ irratti aggaamashee hindhiiftu. Ammallee tiki addaa taasifamuu qaba. Inni nama dhuunfaa tokkodha. Garuu uummata ofiifuu garbummaan qolee cabse kana kan sababa barbaaddatee fincilaaf qophaa’aa jiru dhaabuun hindanda’amu!
Dubbii kanarra hamtuutti deemaa jirra. Abbaan ‘Baqsaa habashaa faana walitti nubaqsuuf carraaqaa jira. Sunuu gatii jabaa nubaasisuuf jira. Hamma sirna kana jigsinutti boqonnaan hinjiru. Kanan erga waggaa 5 asii namaan walitti bu’aa tureefis kanuma argeen malee jibba namaa qabaadheef miti.
Dargaggoonni dhibba afurii ol harra naannawa mana Jawaar Mahaammad ka Finfinnee jirutti argamuun hiriira taasisanii jiru. (Rooyters). Dhimma kana laalchise an ibsa kennan Pireezedaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa, Obbo Shimallis Abdiisaa kaleessa halkan eegdoota Jawwar Mahammad kaasuuf wanti raawwate fudhatama kan hin qabnee fi dogonggora tahu dubbatan.
Anti-Abiy protesters ‘killed’ in Ethiopia